तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका देखि क्यानाडा मा शरण प्राप्त गर्न सक्छन्? | USAHello | USAHello
तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका देखि क्यानाडा मा शरण प्राप्त गर्न सक्छन्?
सुरक्षित विकल्प तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि क्यानाडा मा शरण प्राप्त गर्न प्रयास गरिएको छ? तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्ने निर्णय पहिले जोखिम बारे जान्नुहोस्.
द्वारा पावलले Chiasson फोटो.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक अनिश्चित भविष्य
केही शरणार्थी, asylees, र अन्य आप्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका मा आफ्नो भविष्य बारे अनिश्चित महसुस गर्दै. धेरै वर्ष को लागि संयुक्त राज्य अमेरिका मा गरिएको छ. तिनीहरूले परिवार छ, घरहरू र जब. तिनीहरूले सुरक्षित महसुस छैन, तर यो मूल को आफ्नो देश फर्केर जान खतरनाक हुन सक्छ.
पनि, मातृभूमि सुरक्षा विभाग हजारौं लागि टीपीएस अन्त गर्न योजना छ. धेरै टीपीएस होल्डरहरू संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्ने हुनेछ वा deported गरिनेछ.
क्यानाडा मा शरण प्राप्त प्रयास गर्न छोडेर गर्न
संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रवासिहरु क्यानाडा मा शरण प्राप्त गर्न प्रयास गर्न छोडेर गरिएको छ. तिनीहरूले त्यहाँ आश्रय प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने विश्वास.
तर संयुक्त राज्य अमेरिका देखि एक सरकारी सीमाना मा क्यानाडा प्रवेश गर्ने अधिकांश मानिसहरू क्यानाडा मा शरणार्थी दावी गर्न सक्दैन. यो किनभने दुई देशहरू बीच एउटा सम्झौता छ. त्यसैले प्रवासिहरु हजारौं unofficially सीमा पार गर्दै. तिनीहरूले एक पटक तिनीहरूले देश भित्र छन् शरण लागि लागू गर्न आशा.
क्यानाडा मा पार
तपाईं सुन्न र पढ्न भनेर यसलाई क्यानाडा मा शरण प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सक्छ धेरै कुराहरू. तर यो आश्रय प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छ. र क्यानाडा मा unofficially आइपुगेपछि गर्न जोखिम छन्.
तपाईं कुनै पनि निर्णय गर्नु अघि, तलको भिडियो हेर्न र बारेमा क्यानाडा सरकारले यो पृष्ठ पढ्न क्यानाडा मा शरण दाबी - के हुन्छ?
कृपया क्यानाडा सरकारले यो भिडियो हेर्न.
यो भिडियो पनि उपलब्ध छ क्रियोल र स्पेनी.
अरू के म क्यानाडा मा शरण लागि आवेदन बारेमा थाहा हुनुपर्छ?
क्यानाडा खुला र दयालु प्रवासिहरु गर्न हुनुको लागि प्रतिष्ठा छ. यसको नेताहरूले तिनीहरूले शरणार्थी स्वागत भन्नुभयो छन्. क्यानाडा newcomers ठूलो अवसर प्रदान देखिन्छ. यो सबै केही प्रवासिहरु लागि साँचो छ, तर अरूको लागि वास्तविकता फरक हुन सक्छ:
धेरै मानिसहरू रहन अनुमति हुनेछ
धेरै प्रवासिहरु शरण लागि योग्य छैन. यदि तपाईं योग्य छैन, तपाईं शायद मूल आफ्नो देश फिर्ता deported गरिनेछ, उदाहरणका हैटी वा एल साल्भाडोर लागि. यो तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका फिर्ता अनुमति गरिने असम्भाव्य छ.
त्यहाँ निर्णय लामो पर्खाइ छ
तपाईं शरण दावी गर्न अनुमति छ भने पनि, आफ्नो मामला सुने अघि तपाईं लामो समय प्रतीक्षा हुनेछ. क्यानाडा अध्यागमन सिस्टम को एक संचय छ 40,000 अवस्थामा. तपाईं निर्णय प्राप्त अघि दुई वर्ष हुन सक्छ. जबकि तपाईं प्रतीक्षा, तथापि, तपाईं लाभ र अनुमति काम गर्न प्राप्त हुनेछ.
क्यानाडा मा शरण लागि कसले योग्य गर्छ?
क्यानाडा सरकारले छ विशिष्ट आवश्यकताहरु एक व्यक्ति एक शरणार्थी छलफल गर्न को लागि. तपाईंले तिनीहरूलाई पूरा छैन भने, तपाईं छोड्न आग्रह गरिने वा हटाइने. सरकार अमेरिकी देखि आ टीपीएस धारकहरुको लागि कुनै विशेष कार्यक्रम छ.
संयुक्त राज्य अमेरिका कानुनी प्रवेश
केही मानिसहरू लागि, यो अमेरिकी देखि कानुनी रूपमा आइपुगेपछि क्यानाडा मा शरण दावी गर्न सम्भव छ. यो अपवाद को चार प्रकार किनभने त्यहाँ हो:
परिवारको सदस्य अपवाद
Unaccompanied नाबालिग अपवाद
कागजात होल्डर अपवाद
सार्वजनिक चासो अपवाद
यी अपवाद पढ्न शरणार्थी बारे क्यानाडा सरकारले पृष्ठ. को अपवाद को एक तपाईं लागू हुन सक्छ.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा शरण आवेदकहरुलाई लागि नयाँ प्रक्रिया
यो पृष्ठमा जानकारी आउँछ क्यानाडा सरकारले र अन्य विश्वसनीय स्रोतबाट. यो क्यानाडा जाने जोखिम बारे newcomers शिक्षित गर्न चाहनुभएको छ. USAHello कानुनी सल्लाह दिन छैन, न त हाम्रो सामाग्री इरादा कुनै पनि कानुनी सल्लाह रूपमा लिइने गरिन्छ. तपाईँलाई नि: शुल्क वा कम लागत वकील वा कानुनी सहायता खोजिरहेको भने, हामी तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ निःशुल्क र कम लागत कानुनी सेवा पाउन.